Ma Dhabaa In Kooxda Juventus Ay Qaadayso Jidkii Ay Ku Soo Xero Galin Lahayd Laacibkoodii Hore Ee Pual Pogba? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kooxda Juventus ayaa si buuxda ugu dhaqaaqaysa saxiixa Pual Pogba iyada oo waliba Manchester Uited u diraysa dalab lacag iyo hal ciyaartoy oo muhiim ah iskugu jira waxayna Juve ka faa’iidaysanaysaa khilaafka wakiilka Pogba ee Mino Raiola iyo kooxda Man United.
Mino Raiola ayaa sii wada dagaalka uu ku doonayo in uu markale Pual Pogba ka saaro Manchester United wuxuuna hadda taageero wayn ka helayaa maamulka kooxda Juventus oo doonaya in ay Pogba dib u soo ceshadaan.
Wargayska La Gazzetta dello Sport ayaa soo bandhigay in Juventus ay doonayso sidii ay uga faa’iidaysan lahayd khilaafka Pual Pogba iyo Manchester United isla markaana ay United ugu soo bandhigi lahaayeen dalb ka kooban Aaron Ramsey iyo lacag u dhexaysa 40-45 milyan yuro.
Inkasta oo ay Manchester United saxiixa Pual Pogba ku doonayso lacag aan ka yarayn 150 milyan yuro, haddana maamulka kooxda Juventus oo khibrad badan u leh suuqa ayaa doonaya in ay Old Trafford ku qanciyaan dalab lacageed oo 40-45 milyan ah oo lagu daray Aaron Ramsey.
Aaron Ramsey ayaa si xor ah xagaagii la soo dhaafay waxa uu ugu biiray Juventus laakiin waxa uu waayay boos joogto ah iyada oo hadda Juventus doonaysa in ay ka dhigato dabin ay Man United kaga hesho Pogba.
Wakiilka Pual Pogba ee Mino Raiola iyo Pogba walaalkii ayaa si cad oo aan gabasho lahayn u xaqiijiyay in xidiga reer France uu suuqa xagaaga iskaga bixi doono Man United waxayna hadda Juventus noqotay kooxda ugu cad cad ee Pogba dib u soo ceshan karta.
Man United ayaan xili ciyaareedkan waxba ka faa’iidin in ay Paul Pogba ku sii hayeen Old Trafford iyada oo shaki la galiyay daacadnimadiisa kooxda kadib markii uu inta ugu badan xili ciyaareedkan uu dhaawac ku maqnaa.
Si kastaba ha ahaatee, Juventus ayaa dhaqaajisay qorshaha ay ku doonayso in ay Aaron Ramsey iyo lacag iskguu darto Man United si ay Pual Pogba u soo ceshadaan.
Yaa Hogaaminaaya Gool Dhalinta Horyaalka Somali Premier League?